उपत्यकामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर भएकै हो ? « Pen Nepal
उपत्यकामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर भएकै हो ?
Published On : 12 October, 2020 5:45 pm By : पेननेपाल
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमण चौथो चरणमा प्रवेश गरिसकेको भाइरोलोजिष्ट डा। बाबुराम मरासिनीले बताएका छन् । पछिल्लो केही दिनयता संक्रमणको दर पनि उच्च रहेको र पूर्ण रुपमा समूदायमा प्रभाव परिसकेकाले अहिलेको संक्रमणको स्थितिलाई चौथो चरणमा प्रवेश गरेको रुपमा लिनुपर्ने डा। मरासिनीले बताए ।
भाइरोलोजिष्ट डा। मरासिनीले समग्र देशको संक्रमणको स्थिति भन्दापनि काठमाडौं उपत्यकाको संक्रमण चौथो चरणमा प्रवेश गरेको बताए ।
काठमाडौं उपत्यका भित्रको सबै समुदायभित्र, घरभित्र, कार्यालय लगायतका सबै क्षेत्रमा संक्रमण फैलिइसकेकोले स्थिति नियन्त्रण बाहिर गइसकेको उनले बताए ।
सरकारले सीमा नाकामा आउने मानिसहरुलाई अव्यवहारीक व्यवहार गरेकाले पनि संक्रमण समुदायमा फैलिएको टिप्पणी गरे । उनले कोरोना संक्रमणको सुरुवातमा नेपालबाट भारतमा जान चाहनेलाई सीमामा १४ दिन राख्ने र भारतबाट नेपाल आउन चाहने नागरिकलाई १४ दिन सीमानामै रोक्नु गलत नीति भएको बताए । त्यसको परिणामस्वरुप अहिलेको स्थिति देखा परेको डा। मरासिनीले बताए ।